Taariikhda orodyahan Maryan Nuux Muuse | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Taariikhda orodyahan Maryan Nuux Muuse
Taariikhda orodyahan Maryan Nuux Muuse
Posted by: Mahad Mohamed March 6, 2019
Himilo FM –Maryan Nuux Muuse waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho gaar ahaan dagmada Shibis sannadkii 1998-kii, waxay ku barbaartay isla dagmadaasi iyada oo halkaasi kaga aflaxday dugsi Qur’aan kaddib Maryama waxay ku biirtay mid kamid ah iskuulada maadiga gaar ahaan Maxamuud Mire oo ay ku dhammeysatay dugsiga hoose iyo dhexe. Maryan waxay hadda wax ka barataa iskuulka Macmuur iyada oo mareysa heerka ugu danbeeya ee dugsiga sare.
Maryan oo yaraanteyda aheyd mid aad u jecel ciyaaraha gaar ahaan orodka ayaa heshay rajadii ugu sarreysay ee laga tiigsado ciyaaraha kaddib markii ay xeratay maaliyadda buluugga ah ee xulka qaranka Soomaaliya.
Waxay orodka kusoo biirtay iyada oo aad u yar, waxay ka qeyb gashay tartanka iskuulada ee dhinaca orodada, waxay koobab kula guuleysatay iskuulka Maxamuud Mire orodka 100-200 mitir, wixii markaasi ka danbeeyay waxaa billowday iftiinkii Maryama.
Sannadkii 2013-kii ayay aheyd markii ugu horreysay oo ay kusoo biirtay ciyaaraha iyada oo kamid noqotay naadiga Iimaan Hospital ee xagga orodada, waxayna halkaasi ku muujisay sheekooyin loo riyaaqay iyo bandhig qurux badan waxaana markii ugu horreysay tababare u noqday macallin Nadiifa oo xilligaasi hoggaamiye u aheyd kooxda haweenka ee Iimaan Hospital.
Sanaddii 2016-kii, waxay kusoo biirtay matalidda xulka qaranka Soomaaliya, intii ay xirneyd maaliyadda xulka waxay ka qeyb gashay safaro badan oo dibadda ah waxaana kamid ah;
2013-kii waxay orodka 200 mitir ugu qeyb gashay dalka Botswana inkastoo wax natiijo ah aysan halkaa kala soo laaban.
Sannakii 2014-kii ayay tartan orod ah kaga qeyb gashay dalka Brazil iyada oo oroday 400 mitir balse waxay aheyd wakhti uusan nasiibku siin inay xulkeeda guul ula soo laabato. Isla sanadkaasi waxay orodka 400 mitir ugu qeyb gashay dalka Koongo.
2015-kii dalka Tanzania ayay safar ciyaaro u aaday iyada oo oroday 400 mitir nasiib xummo way ku adkaatay in halkaasi ay billad kala soo laabato.
Riyo waliba oo uu qof leeyahay mar ayuu Alle run ugu dhigaa balse waa nasiib, markaan waxaa yimid hammigii Maryan kaddib markii ay qeyb ka noqotay tartanka afartii sanno mar la qabto ee Olombikada adduunka sannadkii 2016-kii iyada oo hugan calanka buluugga ee dalkeenna ayay geysay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil balse nasiib xummo wakhtiga ayaa ka hiiliyay. 2017-kii tartan ayay kaga qeyb gashay dalka Azerbijaan.
Maryan intii ay soo ciyaareysay waxay hanatay dhowr billad iyo koobab oo ay kula guuleysatay naadiga Iimaan Hospital, in ku dhow 25 billad ayay si shaqsi ah u qaaday halka naadigeeda ay kula guuleysatay siddeed koob oo uu midi yahay kaalinta labaad.
Previous: Sokratis oo sheegay in uu ka tagayo Arsenal
Next: Sawirro: Turkiga oo daah furay masjidka ugu weyn dalkaasi
Manchester United oo iska iibineysa afar daafac
Barcelona oo isha ku heysa Juventus xiddigeeda Matthijs de Ligt